० सर्वज्ञ बाबा, यो माया–प्रेम भनेको के हो नि ?
अत्यन्तै गहन एवं गम्भीर जिज्ञासा प्रकट गर्नुभयो, नानी। ध्यानका साथ श्रवण गर्नुहोस्। माया भनेको महिला हो। प्रेम भनेको पुरुष हो। माया र महिला, दुवैमा ‘म’ छ कि छैन ? अनि प्रेम र पुरुष, दुवैमा ‘प’ छ कि छैन ?
० ओहो ! यति धेरै फरक रहेछ। मलाई त बल्ल तत्त्वज्ञान प्राप्त भयो, हजुर बाबा।
कुरा गर्दै जानुस् न, कति कति तत्त्वज्ञान हुनेछ यहाँलाई। अँ, बरु म तपाईंलाई एउटा सल्लाह दिन्छु, तपाईंले विवाह गर्नुभयो भने, दुई सन्तान पाउनुभयो भने छोरीको नाम माया र छोराका नाम प्रेम राख्नुहोस्।
० बाबाजी, बिहे ?
मैसँग नै गर्नुस् त भनेको छैन नि !
० छैन छैन, तर यो त जमानाअनुसारको युनिक नाम भएन नि बाबा ?
नानी, तिमी अनभिज्ञ छौ। युनिक भनेको के हो ? युनिक भनेको कहीँ नभको, कसैको नभाको भन्या हैन ?
० हो, बाबा।
त म भन्दै छु, तिम्रा छोराछोरी विद्यालय पढ्ने बेला विद्यालयभरि त के देशैभरि नै कोही बालकको नाम प्रेम र कोही बालिकाको नाम माया भएको देख्यौ भने मलाई आशाराम भनेर बोलाउनू। अनि भएन त युनिक ? अझै युनिक बनाउनुछ भने राम, कृष्ण, सीता, राधा राख। अबको जमानामा कहीँ कसैको नभको युनिक नाम यही हुनेछ।
० बाबाजी, प्रेममा परेको कसरी थाहा पाउने ?
जब तिम्रो मनमा, तिम्रो ओठमा यस्तो प्रश्न आउँछ, आफू प्रेममा परेको थाहा पाऊ।
० बाबाजी, हजुर त सर्वज्ञ नै हुनुहुन्छ, यो लभ र सेक्सलाई कसरी परिभाषित गर्न चाहनुहुन्छ ?
सुन नानी, लभ भनेको अनुभूति हो। यो मनमा हुन्छ। सेक्स भनेको अनुभव हो। यो तनमा हुन्छ। अनि अचेल यी दुवै खनखन गन्दै धनमा हुन्छ।
० हजुर त बाबाजस्तो मान्छे, लभमा पर्नु, सेक्स गर्नुभएको छ त ?
ऋषि धमलाजस्तो प्रश्न सोध्यौ। तैपनि सुन। ‘बाबा’ उसै कोही हुन्छ त नानी ? उत्तरआधुनिक हुन, आधुनिक हुनैपर्छ। रूप केही होइन भन्न करिश्मा हुनैपर्छ। पैसा मैला हो भन्न विनोद चौधरी हुनैपर्छ। सर्टिफिकेट–डिग्री–पीएचडी अर्थात् बुर्जुवा शिक्षा केही होइन भन्न बाबुराम हुनैपर्छ। कुरा त तिमीले बुझिनौ भन्ने मैले बुझिसकेँ। तैपनि बुझेँ भन।
० बाबा, अब म हजुरलाई के सोधूँ ?
हजुरको जो इच्छा।
० नेपालमा प्रेम गर्ने वातावरण छ त, बाबा ?
छैन नि, त्यही भएर त म बाबा भएको।
सुन नानी। यहाँ सेफ एन सिक्रेट, निट एन क्लिन, सस्तो एवं मस्तो डेटिङ स्पट नै छैन। महँगो पैसा तिरेर होटल, रेस्टुरेन्ट, गेस्ट हाउस, सिनेमा हल गएर साध्य पनि भएन मलाई। भुइँचालोपछि वसन्तपुर मन्दिर नि उठेन। क्यान्टिनमा बसिरहँदा बोकाहरूले म्याम्या गरेर हैरान। रत्न पार्क, फन पार्क, त्रिभुवन पार्क, चोभार पार्क, सुन्द्री जल, यूएन पार्क, शंख पार्क जाँदा मलाई प्रेम अंकुरित भएन, तनाव अंकुरित भयो। कतिचोटि त त्यहीँबाट पक्राउ पनि परेँ। पार्क भन्या छ अनि लेख्या छ ः
– जोडा–जोडी बस्न मनाही छ।
— अश्लील हर्कत गरेमा कारबाही गरिनेछ।
पार्कमा त ‘यहाँ प्रेम जोडीलाई हार्दिक स्वागत छ’ लेख्नुपर्ने हैन ? अनि मैले आश्रम बनाएँ। मेरो आश्रममा तिमीहरूजस्ता सबैलाई सधैँ स्वागत छ। मेरो आश्रममा गाँस, बास, कपास तथा सहवासको राम्रो व्यवस्था छ— प्रोप्राइटर सर्वज्ञ बाबा। यो गार्डेन अफ ड्रिम्स भन्दा धेरै सस्तो गार्डेन अफ फ्रिडम हो, नानी।
० बाबाजी, अहिले नेपालमा रेड लाइट एरिया, इन्जोय जोन, सेक्स टुरिजमको कुरा सुन्नुभकै होला, यसमा हजुरको के राय छ ?
यो ठीक हो। हुनैपर्छ। तर, यी सबमा हामी जस्ता बाबाजी, स्वामीजी, भिक्षुजी, धर्मभीरुजीहरूले पुर्‍याएको योगदानको मूल्यांकन होस् भन्न चाहन्छु। (बाबाजी, फोन खोलेर काण्डहरूको भिडियो देखाउँछन्।)
० बाबाजी, सरकारले पोर्न साइट त बन्द गरेको छ, यहाँको मोबाइलभरि ?
बालिके, यो आफ्नै बारीको, मेरै आश्रमको अग्र्यानिक उत्पादन हो। तिमी हेर्न सक्छ्यौ। ल हेर त मलाई। कति अघोरी बाबासित मात्र इन्टरभ्यू लिन्छ्यौ तिमी, यहाँ मोबाइलमा सर्वज्ञ बाबालाई पनि हेर न ?
० बाबाजी, मलाई पोर्न हेर् नभन्नुस्। आफ्नो घरमा आएका विद्यार्थीलाई पोर्न देखाउने हुँदा डा. कृष्ण चनको त्यो हालत भयो। आफ्नो आश्रममा आएकी म भल्गर सरी भ्लगरलाई पोर्न देखाउन खोज्ने तपाईं ? म पनि तपाईंलाई मीटूको अभियोग लगाउन सक्छु। अहिले संसारभर मिटूको लहर छ, थाहा होला नि ?
मीटू ? सबै थाहा छ। त्यो स्वार्थ मिलुञ्जेलको इलु इलु, अनि लास्टाँ मीटू हैन त ? सब थाहा छ। एम सरको बारेमा पनि थाह छ। सीतायनका सातै काण्ड थाहा छ। तिमीहरू अब रोएर बस।
० किन रोएर बस्ने हामी ?
तिमीहरू प्रेम प्रस्ताव राख्नेलाई त मीटू लाइदिन्छौ। प्रेम दिवसमा त तिमीहरू एक्लै छौ। यस्तो वातावरणमा तिमीहरूलाई हग त अब कसैले गर्दैन, प्रपोजै गर्न डराउँछ सब केटाहरू।
० तपाईं सिरियस्ली भन्नुस्, अहिलेको महिला हिंसाको १६ दिने अभियान, मीटू अभियानलाई तपाईंले साँच्चै कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो सबलाई मैले यसरी उत्सुकतासाथ हेरेको छु कि जसरी म अहिले तिमीलाई हेरिरहेको छु।
० अब अन्तिममा मेरो युट्युब च्यानलको शीर्षक हुने गरी भन्नुस्, विवाहअघिको सेक्स, भर्जिनिटीबारे यहाँको के धारणा छ ?
विवाहअघिको सेक्स ? साँच्चै वाह नि। अँ, यो भर्जिनिटी भन्ने कुरा महान् भ्रम र दोष हो। महाभारतमा सत्यवतीले शन्तनुसित बिहे गर्नुअघि परासर ऋषिको सहवासबाट व्यास जन्मे। दुवै छोरा विचित्रवीर्य र चित्रांगतको निःसन्तान अवस्थामै मृत्यु भएपछि बुहारी अम्बिका र अम्बालिकालाई व्याससित समागमको निर्देशन। धृत र पाण्डुको जन्म। विदुरलाई पनि दासीपुत्र, व्यास जोडिँदैन। बा फरक–फरक भए पनि पाँच जना पाण्डु–पुत्र कहलिए। यस्ता जाबा कुरा उहिल्यै थिए। अब सर्वज्ञ बाबा त झन् प्रेम र सेक्सको मामिलामा साह्रै उदारदृष्टि राख्छ, अनि वक्रदृष्टि नि राख्छ। गाँजा फुकुवा गर्नुपर्छ। चाणक्यले भनेजस्तो कागले जसरी मैथुन गर्नुपर्छ हरेकले।
० बाबाजी यो त अत्ति भयो, के तपाईंको नाम आशाराम हो ? कृष्णदास हो ? राम बम्जन हो ?
खै बालिके, प्रेममा परेपछि म सब कुरा भुल्छु। मेरो नाम केक्के हो केक्के। पहिला यी सबै थियो क्यारे मेरो नाम। अब मैले ती बदनाम नाम बदलेर नयाँ नाम सर्वज्ञ बाबा धारण गरिसकेको छु।
० बाबाजी, म जान्छु अब, हस्त।
हस्त ? कस्तो हस्त ? कहाँ हस्त ? बहादुर कि कुमार ? कहाँ जाने कुरा गर्‍या, प्रसाद नखाई ? आज तिमीले सर्वज्ञ बाबाजीको प्रसाद सेवन गर्नुपर्छ। तिमीसित धेरै कुरा गर्नुछ, मैले। म तिमीलाई यो आश्रममा आश्रय मात्र दिन्नँ, शिक्षा पनि दिन्छु। तिमीलाई मेरो आश्रममा स्वागत छ, बालिके। अब तँ सर्वज्ञ गुरुको असल सेविका बन्नुपर्छ।
(तपाईं हुँदै तिमीबाट तँमा उक्लेको सर्वज्ञ गोरुले युट्युबर नानीलाई च्याप्पै समाउँछ। चिच्याहटको आवाजसँगै पर्दा खस्छ। नेपथ्यमा संगीत सुनिन्छः जेजे हुन्छ यहाँ पर्दा पछाडि नै हुन्छ।)